Kazakhstan: Fifanoheran-kevitra ara-ekonomika, fanavakavahana araka ny maha-lahy na vavy ary ny fitotonganan’ny siansa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2009 17:58 GMT
Vakio amin'ny teny Français, polski, Español, বাংলা, русский, English
Manohy ny resaka momba ny fifandraisana ara-sosialy ireo mpitoraka blaogy any Kazakhstan. Tamin'ny herinandro lasa teo, ny adihevitra teto amin'ny aterineto dia nampiseho lohahevitra samihafa.
Ny mpitoraka blaogy Lord-Fame dia novangian'ireo tomponandraikitry ny hetra izay nanambara fa tsy ampy araka ny tokony ho izy ireo mpiasa ao amin'ny orinasany, ambanin'ny “salanisa ho an'ny orinasa” [ru]
Iza no tsisy saina nahita izany fitsipika izany? Hatraiza ny hadalanao ka hametrahanao ireo orinasa REHETRA ho anaty lasitra iray mitovy?
Mbola mikasika ny sehatra ara-ekonomika ihany, Thousand-pa dia tsy mahazo hoe nahoana, na dia teo aza ny filazana entin'ny fanjakana, no nolavin'ireo tomponandraikitra ny volavolan-kevitra mikasika ny hanondrotana ny karaman'ireo mpiasan'ny fikambanana izay vatsin'ny fanjakana vola [ru]:
Inona no antony ilazana fa tapitra ny krizy raha toa ka afaka iray volana aty aoriana dia ho mbola io krizy teo aloha io ihany no teti-dratsy ampiasaina mba hahafahana miverina amin'ny fampanantenana taloha?
D-lov dia miahiahy ny tsy fahampian'ny ady hevitra ao Kazakhstan mikasika ny fanararaotana ara-nofo any ampiasana [ru]:
Eto ireo vehivavy dia manaiky ny fanjakan'ny lehilahy amin'ny sehatra rehetra sy amin'ny endriny rehetra , izay hita taratra eny amin'ny firenena Aziatika efa mba mandroso. Ny miara-mandry amin'ny lehibe dia voninahitra ho azy ireo. Raha misy vehivavy mahasarika ny maso nefa tsy manam-pikasana hisarika ny hafa amin'ny filàna, ary, fanampin'izay, mbola vehivavy mahira-tsaina eo amin'ny asany, dia lasa “mpifaninana”, na “mpilalao mampidi-doza” , lasa “vehivavy tsy maha-te ho tia” , sns.
Megakhuimyak dia matahotra momba ny kalitaon'ny fikarohana ara-tsiantifika sy ara-panabeazana ao Kazakhstan [ru]:
Ny famakafakana ny tantaran'ny siansa any Kazakhstan dia nampiseho fa ny mpitarika antsika izay tsy mety aongana dia avy amin'ny siansa voajanahary: mpahalala momba ny vohontany, injenieran'ny harena ankibon'ny tany, ary ireo manampahaizana momba ny zava-manan'aina rehetra. Tsy manana siantifika afaka mantanteraka asa amina sehatra toy izany intsony ny firenena – ary, raha ny fandehan'ny fampianarantsika amin'izao, dia mety tsy hanana intsony tahaka azy ireo mihitsy isika.
pycm mamintina ny zava-mitranga amina hainteny manesoeso [ru]:
Ny hevitra mifanohitra dia ny hoe tsy manana kolontsaina mihitsy ny firenena, nefa manana Minisitry ny kolotsaina. Amin'ny lafiny iray, hita na aiza na aiza ny kolikoly, nefa tsy misy Minisitry ny kolikoly.
Hita ihany koa ao amin'ny neweurasia (nadikan'i Andrey)
Ireo mpitoraka blaogy any Kazakhstan dia manohy mikatsaka hatrany ny loha-hevitra mikasika ny tombon-tsoa ara-tsosialy tamin'ny herin'andro lasa teo, ny ady hevitra (online) dia nampiseho loha-hevitra samihafa.
Ny mpitoraka blaogy Lord-Fame dia novangian'ireo tompon'andraikitry ny hetra izay nilaza fa tsy ampy intsony ny mpiasa ao amin'ny orin'asany, vitsy no ny “sehatra indostrialy antonontonony”[ru]
Iza no tsisy saina nahita izany fitsipika izany? Amin’ny fomba adaladala ahoana no hanerena ireo orin’asan’ny sehatra indostrialy hitovy lenta aminy ?
Mbola mikasika ny sehatra ara-ekonomika ihany, Thousand-pa dia tsy mahazo hoe ahoana, na dia eo aza ny filazana entin'ny fanjakana, nolavon'ireo tompon'andraikitra ny volavolan-kevitra mikasika ny hanondrotana ny karaman'ireo mpiasan'ny fikambanana izay vatsin'izy ireo vola [ru]:
Inona no antony hilazana fa tapitra y krizy raha toa ka afaka iray volana aty aoriana dia ho mbola io krizy teo aloha io ihany no teti-dratsy ampiasaina mba hahafahana miverina amin'ny fampanantenana teo aloha?
D-lov dia miahiahy ny tsy fahampian'ny ady hevitra ao Kazakhstan mikasika ny fanolanana ao anatin'ny sehatr'asa [ru]:
Eto dia manaiky ny fananan'ny lehilahy lanjany kokoa no izy ireo na ara-kilasy na ara-endrika ireo vehivavy, izay hita taratra any amin'ny firenena Asiatika efa mandroso. Mandry miaraka amin'ny lehibe dia voninahitra ho azy ireo. Raha misy vehivavy mahasarika ny maso nefa tsy manam-pikasana hisarika ny hafa amin'ny filàna, ary, fanampin'izay koa, mbola vehivavy mahiratsaina tsara eo amin'ny asany, dia lasa “mpifaninana,” na “mpilalao mampidi-doza,” na lasa “vehivav ts maha-te ho tia,” sns.
Megakhuimyak dia miahiahy momba ny kalitaon'ny fikarohana ara-tsiantifika sy fampianarana ao Kazakhstan [ru]:
Ny famakafakana ny tantaran'ny siansa ao Kazakhstan dia mampiseho fa ny mpitarika antsika izay tsy azo aogana dia avy amin'ny siansa voajanahary: geologists, mining engineers, biologists. The country no longer has scientists who could perform work on a comparable level – and, given the quality of our education, we will never have them again.
Azerbaijan 8 ora izay